शीर्ष १० ओप्रा विन्फ्रे उद्धरण २०२० - उद्धरण प्याडिया
जीवन एक उपहार हो र तपाईले यसलाई जहिले पनि मूल्यवान् नै मान्नुपर्दछ। Oprah Winfrey सधैं भएको छ प्रेरक स्पीकर, जसले जीवन र वास्तविकताहरूको बारेमा कुरा गर्दछ।
उनी भन्छिन् कि यो जीवनको जस्तो लाग्छ आलिंगन गर्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ, तर एकै साथ, एकले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईंले आफ्नो जीवनको ठूलो अंश छान्नुभयो। यो सबै तपाइँमा खुशी छ कि छैन तपाइँमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, तपाईंले चीजहरू बुद्धिमानीपूर्वक निर्णय गर्नु पर्छ।
तपाईंले यो निश्चित गर्नु आवश्यक छ कि जीवन तपाईंको लागि उपहार हो, र यो फेरि कहिले आउँदैन। एक चोटि खर्च गरिएको समय गयो, र तपाइँ यो फेरि फेरी दोहोर्याउन सक्नुहुन्न। तसर्थ, यो तपाइँ मा निर्भर गर्दछ कि तपाइँ कसरी चीजहरू बुझ्नुहुन्छ, र यसैले निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले चीजहरू राम्रोसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ।
साथै, Oprah Winfrey भन्छन् कि हामी आफैंले घेरेको मान्छेहरूलाई निर्णय गर्छौं! हामी सबै चीज कसरी लिन्छौं भन्ने कुरा हाम्रोमा निर्भर हुन्छ। तसर्थ, पियर सर्कल जुन हामी बस्न छनौट गर्दछौं सबै हाम्रो आफ्नै नियन्त्रणमा छ। परिणाम स्वरूप, हामी जहिले पनि हामीलाई उठाउने मानिसहरू वरिपरि छनौट गर्नै पर्छ।
हामीले अरूलाई निरुत्साहित पार्न कहिले पनि अनुमति दिनु हुँदैन। यो त्यस्तो व्यक्तिसँग हुनु आवश्यक छ जसले हामीलाई उत्प्रेरित गर्छन् र हामीलाई सफलता प्राप्त गर्न प्रेरणा दिन्छन् न कि उनीहरूसँग जो हाम्रो दु: खको कारण बन्छन्।
Oprah Winfrey उद्धरण धेरैको लागि सँधै प्रेरणाको एक महान स्रोत भएको छ, र मानिसहरूलाई सधैं खुशी र बुद्धिमानी हुन हौसला प्रदान गर्न उनी देखिएको छ।
उनी भन्छिन् कि तपाईंले आफ्ना गल्तीहरूलाई तपाईंले कहिल्यै गर्न सक्ने सब भन्दा ठूलो गल्तीको रूपमा कहिल्यै गणना गर्नु हुँदैन, र जीवनभर यसको लागि पश्चाताप गरिरहनुहोस्। यसको सट्टामा, तपाईंले सँधै तिनीहरूलाई तपाईंको पाठको रूपमा चिन्ह लगाउनुपर्दछ र जान्नुपर्दछ कि उनीहरूले तपाईंलाई यता टाढा ल्याए। यो तपाईंको गल्तीहरू हो कि तपाईं बुद्धिमान बनाउनुहोस्!
Oprah Winfrey संसारभरका मानिसहरूलाई सधै प्रेरणा दिइयो। फलस्वरूप, उनी भन्छिन् कि तपाईंले जीवनलाई सकारात्मक रूपले लिनुपर्दछ, र त्यसपछि मात्र तपाईं यसबाट थप प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
Oprah Winfrey उद्धरण स्व-स्पष्टीकरणात्मक हो र ती मध्ये धेरैमा तपाईले त्यस व्यक्तिको जीवनको गहिराइलाई ध्यानमा राख्नुको सट्टामा यसको लम्बाई देख्नको लागि भनेर सोध्नु भएको थियो।
उनी भन्छिन् कि यो महत्वपूर्ण छ तपाईको जीवनको प्रत्येक पल बाँच, तपाई बस्नु भएको बर्षको संख्यामा हेर्नुको सट्टा!
आफूलाई उच्च स्थानमा लिने व्यक्तिहरूको साथ आफूलाई घेरामा लानुहोस्। - ओप्रा विन्फ्रे
तपाईंको जीवनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू हुनु आवश्यक छ जसले तपाईंको आत्मालाई उत्थान गर्दछ, तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्दछ, र तपाईंलाई धक्का दिन्छ ...
तपाईंको घाउलाई बुद्धिमा परिणत गर्नुहोस्। - ओप्रा विन्फ्रे
जीवनमा असफलता अपरिहार्य छ। हामीसँग हाम्रो हिस्सा उतार-चढाव हुनेछ। हामीले सामना गर्नु पर्छ ...
तपाई केमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाई के सोच्नुहुन्छ वा के तपाई चाहानुहुन्छ भन्ने होइन। - ओप्रा विन्फ्रे
हामी सबैले जीवनका मार्गनिर्देशनहरूका सिद्धान्तहरूको पालना गर्दछौं। एकै साथ सबै ...
तपाइँ के गर्न चाहानुहुन्छ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँले के गर्न चाहानुहुन्छ गर्नुहोस्। - ओप्रा विन्फ्रे
तपाईले लिन सक्ने सब भन्दा ठूलो साहसिक कार्य भनेको तपाईको सपनाको जीवन बिताउनु हो। - ओप्रा विन्फ्रे
यस क्षणमा उत्तम गरेर तपाईंलाई अर्को क्षणको लागि उत्तम ठाउँमा राख्दछ। - ओप्रा विन्फ्रे
यस क्षणमा उत्तम गरेर तपाईंलाई अर्को क्षणको लागि उत्तम ठाउँमा राख्दछ। - ओपरा ...
तपाईं आफ्नो जीवनको लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो डिसफंक्शनको लागि कसैलाई दोष दिन सक्नुहुन्न। जीवन साँच्चै अगाडि बढिरहेको छ। - ओप्रा विन्फ्रे
तपाईं आफ्नो जीवनको लागि जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। केहि चीजहरू बाहिर निस्के कि…
यो हाम्रो शरीर, दिमाग, र आत्मामा विश्वास छ जसले हामीलाई नयाँ रोमांच खोजिरहनुको लागि अनुमति दिन्छ। - ओप्रा विन्फ्रे
यो हाम्रो शरीर, दिमाग, र आत्मामा विश्वास छ जसले हामीलाई नयाँ रोमांचहरूको लागि खोजी रहन अनुमति दिन्छ।…
आफूसँग भएको कुराको लागि धन्यवादी हुनुहोस्; तपाईंसँग अधिक हुनु पर्छ। यदि तपाईं केमा छैन भने ध्यान दिनुहोस्, तपाईं कहिल्यै, कहिल्यै पर्याप्त छैन। - ओप्रा विन्फ्रे
जीवनमा, तपाईसँग नभएको चीजमाथि सताईको मतलब छैन! यसले केहि गर्दैन र…